Isijeziso konondweba ababhacazile
UKAPUTENI waMaZulu uThapelo Nyongo ophakathi nendawo nozakwabo baphindela emakhaya bedangele ngemuva kokuphikwa kwamagoli bedlala neKaizer Chiefs
MALIBONGWE MDLETSHE | October 6, 2019
ISOUTH African Football Association (Safa) iqhumise inkalivasi kubasizi bonondweba ababili abathathe izinqumo eziphambene zavuna iKaizer Chiefs yavuka namaphuzu ayisithupha emidlalweni emibili ye-Absa Premiership ngenyanga edlule.
Abasizi bonondweba abamiswe yiSafa amasonto amane bengaqokelwa emidlalweni yeNational Soccer League, nguMervyn van Wyk ophike amagoli amabili AmaZulu agcine edliwe yiChiefs ngo 2-0 ngoSepthemba 24.
Kuqhume isigwebo esifanayo naku-Athuxolo Madela naye obephethe iduku ehlulwa wukubona i-offside egolini likaLebogang Manyama iChiefs iguqisa iBaroka ngo 1-0 ngoSepthemba 28.
Lawo maphuzu ayisithupha asize iMpofana yaya ekhefini lemidlalo yeFederation of International Football Association (Fifa) iqhwakele ngawu-19 ngemuva kwemidlalo eyisishiyagalombili.
ISafa iqhube yathi uVan Wyk noMadela bazovunyelwa bashaye umugqa emidlalweni yezifunda (okuyiSAB Regional League neSasol Womens League)
Labo nondweba baqokelwe ongoti abazobasiza ngezeluleko ezizobavula amehlo ngemithetho nabazothumela kwiSafa umbiko obanzi ozobe ukhuluma ngokuqonda kabusha imithetho ngendlela kwalabo nondweba.
Usihlalo wekomiti lonondweba, * -Anastasia Tischlas, ucashunywe kulesi sitatimende ekhala ngokuphazamiseka emoyeni ngenxa yalezi zinqumo ezishaya eceleni ngeshwa ezinesandla emiphumeleni yemidlalo okubangwa kuyo izigidi.
“Okumangazayo wukuthi akukudala sibe nePre-season Course ethembise izithelo ngoJulayi lapho onondweba befundiswe kabanzi ngama-offside. Besinongoti bethu ababili uLim Kee Chong noFelix Tangawarima abebengamele lezo zifundo,” kusho uTsichlas.
“La maphutha awamukelekile futhi ngeke aze abekezelelwe. Umsebenzi wethu nokho ukubasiza labo nondweba ngesikhathi besamisiwe babuyele esimeni esifanele. Sinethemba ukuthi bazobuya sebeqinile futhi benze umsebenzi omuhle.”
Sibe sikhulu isililo ngalabo nondweba ngisho nasezinkundleni zokuxhumana kwaze kwabikwa nokuthi uVan Wyk ungumlandeli wokuqina weMpofana.
Nomqeqeshi weMamelodi Sundowns, uPitso Mosimane, usolwe ngokuthanda ukukhuluma uma eyigudla le ndaba ethi iChiefs izosidla isicoco seligi ngoba idlalelwa ngonondweba.
Nasekupheleni kwesizini edlule kube nesidididi ngesicoco seligi ngenxa yazo izinqumo zonondweba.
Omunye unompempe oseke wabhekana nolaka lweSafa uPhelelani Ndaba waKwaZulu-Natal. Ukushaya kwakhe into ephansi kwamangaza ngoba wayeqokwe njengonondweba ovelele we-Premiership.